आज सूर्यग्रहण लाग्दै, ग्रहणको समयमा के गर्ने के नगर्ने ? - Unity Khabar
आज सूर्यग्रहण लाग्दै, ग्रहणको समयमा के गर्ने के नगर्ने ?
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलवार ०८:४३
काठमाडौं : आज मंगलरबार सूर्यग्रहण लाग्दैछ । सूर्य ग्रहण रातिको समयमा लाग्ने भएका कारण नेपाल र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट देखिने छैन । प्रशान्त महासागर र दक्षिण अमेरिकाबाट देखिनेछ । यो सूर्यग्रहण सवैभन्दा धेरै समय चार मिनेट ३३ सेकेण्डसम्म रहने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
सूर्य ग्रहण चिली र अर्जेंटीनाको केही भाग र दक्षिण प्रशांत क्षेत्रबाट समेत देखिने छ । दक्षिण अमेरिकाका केहि देशबाट आंशिक ग्रहण दिखिनेछ । ज्योतिष मान्यताका अनुसार ग्रहणको समयमा मानिसले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा यो समयमा केही काम गर्न वर्जित गर्नुपर्ने ज्योतिष शास्त्रीहरु बताउँछन् ।
ग्रहणको प्रत्यक्ष प्रभावमा राशिमा पर्ने गरेको ज्योतिषीहरुको दाबी छ । त्यसकारण राशिअनुसार मानिसहरुले चन्द्र अथाव सूर्य कुनै पनि ग्रहण हेर्न नहुने बताइन्छ । सूर्य ग्रहणको समयमा विशेषगरी गर्भवती महिलाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । ग्रहणअघि सुतक लागेपछि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । जुन निम्न छन् ।
ग्रहणको समयमा विभिन्न पराबैजनी किरणहरु उत्पन्न हुने हुँदा बच्चामा नकारात्मक असर पर्छ । ग्रहणको समयमा वातावरणमा समेत नकारात्मक किरणहरु पैदा हुने हुँदा घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो मानिन्छ । खबरहब